[Tuesday, February 6th, 18] :: Kuliyada Caafimaadka Magaalada Jig-jiga Oo Ay Ka Qalinjabiyeen 216 Arday
Jig-jiga(RH)Kuliyada Caafimaadka Magaalada Jigjiga ayaa maanta waxaa ka qalin-jabiyey 216. Arday,Munaasibadan Qalinjabinta ayaa waxaa lagu qabtay. hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI ee Magaalada Jigjiga.
Waxaana ka soo qaybgalay xafladan ay ku qalinjabiyeen ardaydan fidinta xirfadlayaasha caafimaadku masuuliyiinta kuliyada caafimaadka ee jigjiga, masuuliyiin ka socday xafiiska caafimaadka DDSI, masuuliyiin kale oo heer deegaan ah, ardayda qalinjabinaysay iyo marti sharaf kale.
Xafladan waxaa ugu horayntii ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI Xasan Ismaaciil Cali oo ka warbixiyay oo ugu horayntii hambalyo u diray xirfadlayaashan maanta qalin jabiyay wuxuuna si qoto dheer uga warbixiyay ahmiyada uu leeyahay barnaamijka fidinta adeega caafimaadka iyo muhiimada uu u leeyahay bulshada deegaanka. wasiirka ayaa ku booriyay xirfadlayaashan maanta qalin jabiyay in ay ka soo baxaan xilwayn iska saaraan in ay si fuhan ugu adeegaan bulshada islamarkaana ay bixiyaan adeeg caafimaad oo taya leh.
Dhankiisa waxaa ka hadlay xafladan qalinjabinta maareeye ku xigeenka kuliyada caafimaadka jigjiga Cabdibari Macalin Maxamed oo hambalyo ka dib ka warbixiyay taariikhada iyo soonyaalka kuliyada islamarkaana sheegay in ay tahay kuliyada xooga saarta soo saarida xirfadlayaal ku gaashaaman culuunta caafimaadka kuwaasi oo kaalin mug leh ka qaata taaba galinta siyaasada caafimaadka maareeya ku xigeenka ayaa sharax dheerka bixiyay ahmiyada xukuumada DDSI siisay awoodsiinta kuliyada caafimaadka ee jigjiga taasi oo la gaadhsiiyay ayuu yidhi maareeye ku xigeenku in la gaadhsiiyay in ay bixiso heerka shahaadada degree sidoo kalena daboosho baahida bulshada deegaanka ee dhinaca adeegyada caafimaadka iyo in ay xal waara u hesho kuliyada daraasaadyada dhinacyada adeegyada caafimaadka.
maareeye ku xigeenka oo siiwata hadalkiis in ay kuliyada dabooshay baahidii ay ardada deegaanku culuunta caafimaadka u doonan jireen jaamacadaha kale ee dalka. wuxuuna maareeye ku xigeenku ku booriyay ardaydan maanta qalin jabisay in ay ka midho dhaliyaan culuuntii caafimaadka ee la baray ardaydan islamarkaana noqdaan kuwa gaadhsiiya bulshada adeeg caafimaad oo tayo iyo xushmad leh.
Gaba-gabadii Xafladaasi waxaa abaalmarino kala duwan la gudoonsiiyay ardaydii gashay kaalmaha hore ee dhinaca dhibcaha waxbarashada.